Katsi dzine hupenyu hunomwe - Chikonzero chechirevo ichi | Bezzia
Sei katsi dzichigara dzichinzi dzine hupenyu 7? Pamwe ndiwe uyu tsananguro asi unenge uchinetseka kuti sei mutsara wakadaro. Zvakanaka, nhasi inguva yekukwanisa kugadzirisa kusava nechokwadi ikoko kwakatimirira. Sezvo vari nguva dzose curiosities kufunga uye kana uchigara imwe kana kupfuura katsi, iwe unenge kunyanya kufarira kuziva mhinduro.
Makati agara achibatanidzwa nezvinhu zvakanaka munhoroondo yose. Zvichida ndicho chikonzero nei kune nguva dzose kune zvakawanda zvekuda kuziva zvakavapoteredza. Nokudaro, hazvishamisi kuti tinofanirawo kutaura pamusoro pehupenyu hunomwe hwatinotaura zvakanyanya kana tikafunga nezvahwo. Tsvaga!
1 mano ako omuviri
2 Ngano muMiddle Ages
3 nhamba yemashiripiti
4 kuberekwazve kwake
mano ako omuviri
Katsi dzinonzi dzine hupenyu hunomwe nekuda kwesimba radzo. Izvi zvinoreva kuti, izvi hazvizoiti kuti vasunungurwe kubva kune chero chirwere, asi nekuda kwehutano hwavo hwepanyama, vanogona kudonha kubva pakakwirira pasina kukuvara. Chinhu icho chatinogara tichinzwa nezve katsi dzinomhara patsoka dzadzo chakafanana nezvatataura. Hazvirevi kuti vanomhara netsoka, asi kana vadonha havakuvare nyore semamwe marudzi. Mukuwedzera pakuva nehuremu hwakareruka, inofanira kutaurwa kuti vane musana wakanyanyisa kushanduka uye chiyero chikuru. Pavanodonha, ivo vachagadzira rudzi rwearch nemusana wavo, izvo zvinoita kuti ishande separachute. Iye zvino tinonzwisisa zvishoma nezvekumhara patsoka dzako uye pasina kukuvara.
Ngano muMiddle Ages
Ichokwadi kuti katsi dzagara dzichibatanidzwa mumhando dzose dzengano. Asi muMiddle Ages vaigara vari chikamu chezvitsinga. Kunyange zvazvo vakanga vasingadi, nguva dzose vaiva neukama hwokuva pedyo navo, pamwe chete nokupoteredzwa nevaroyi kana kuti varoyi. Zvichida nemhaka bedzi yerevo yokudisa yadzo. Asi pasinei nokuti zvingava zvakadaro, zvinoita sokuti pasinei nokutambudzwa vakanga varipo nguva dzose. Saka ndipo pakazotorwa pfungwa yekuti vanogona kuita zvemashiripiti. Kubva pakabatwa varoyi, mhuka dzakatamburawo saizvozvo. Asi sezvo vasiri vose vakafunga zvakafanana, pakanga pane vanhu vakawanda vakavagamuchira.
Kuwedzera pane zvatataura pamusoro payo, nhamba 7 yakawedzerwa kwairi.Kupfuura chinhu chipi nechipi nokuti vaionekwa semhuka kupfuura tsvene, hapana chinhu chakaita sokuibatanidza nenhamba yaivawo yemashiripiti. Ehe, kana wanga usingazive kuti ndiyo nhamba 7 inokwezva rombo rakanaka. Pamusoro pekugara uchibatanidzwa nemashiripiti. Nokudaro, kubatana kweizvi kumhuka. Asi chenjera, nekuti kune dzimwe nyika ivo havafungirwe kuti vane 7 hupenyu. Munyika dzeAnglo-Saxon zvinonzi ine 9, nekuti inofananidzirwa nenhoroondo yaMwari Ra. uyo akaita rwendo kuenda kunyika yepasi ari muchimiro chekatsi ndokutora upenyu kubva kuvamwari vose. Nepo kune veTurks, katsi dzine hupenyu hushoma. Saka, izvi zvinoenderana nekutenda kwenzvimbo imwe neimwe.
Isu tatoona kuti katsi dzinogara dzakabatana nenyika dzemashiripiti uye dzinonakidza ngano uye nyaya. Nokuda kwechikonzero ichi, mumutauro weEgypt kuberekwazve kwemhuka kwaifungwawo. Kuti katsi dzaizodzokera kumunhu mushure mekunge dzasvika pakuzvarwa patsva kwechinomwe. Saka, kuziva izvi zvose, zviri nyore kunzwisisa kuti sei katsi dzine 7 hupenyu. Ehe, zvese izvi zvakasiiwa uye ivo vane hupenyu humwe chete. Imwe yatinofanira kutarisira uye kuvapa zvese zvakanakisisa kuitira kuti vanakidzwe nazvo zvizere. Saka, yeuka kuti matanho ekuchengetedza anofanirwa kugara ari mumba mako. Ngatirege kuedza magumo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mascotas » Sei vachiti katsi dzine hupenyu 7?
Matanho ekuvanza bvudzi jena mutsiye